Community Partner Organisations Archives | Utah Pride Center
musha » Nharaunda Partner Masangano
Directory Category: Nharaunda Partner Masangano
Nharaunda Partner Masangano
IAmerican Civil Liberties Union (ACLU) ndiyo inochengetedza rusununguko rusununguko nenhengo dzinopfuura mamirioni 1.5 nevatsigiri uye vanobatana nemahofisi echitsauko chenyika kumatunhu makumi mashanu nePuerto Rico. Yakavambwa muna 1920…
KUBATSIRA KUTAURA PAMWE CHETE CHOKWADI
Genderbands anobatsira transgender uye vanhukadzi vasingateedzere vanhu vanobhadharira yavo yezve shanduko-inoenderana zvido. Isu tinoita izvi kuburikidza nehukama, kutengesa zvakananga, uye kukumbira kwemipiro.
Kugamuchirwa kuHRC Utah
Human Rights Campaign inomiririra boka rinopfuura mamirioni matatu enhengo nevatsigiri nyika yese. Senyika huru lesbian, ngochani, bisexual, transgender uye queer kodzero dzesangano, HRC inofungidzira nyika umo vanhu veLGBTQ vanovimbiswa kodzero dzavo dzakaenzana, uye vanogona kuvhurika, kutendeseka uye kuchengeteka kumba, kubasa uye munharaunda.
PFLAG inosimudzira hutano uye kugara zvakanaka kwevanhu vanoita ngochani, ngochani, bisexual uye transgender vanhu, mhuri dzavo uye shamwari kuburikidza
- kutsigira, kutsungirira nharaunda yakashata;
- dzidzo, kuvhenekera veruzhinji vasina ruzivo;
- kukurudzira, kupedza rusarura uye kuwana kodzero dzakaenzana dzevanhu.
Vabereki, Mhuri uye Shamwari dzeLesbians neGays dzinopa mukana wekutaurirana nezve kuita bonde uye kuzivikanwa kwechikadzi, uye inoita kugadzira nzanga ine hutano uye inoremekedza kusiyana kwevanhu.